Simplr • Suumanka Kafiican ee Kaamirooyinka Yaryar • Lagu sameeyay USA
Qalabkee ayaan ku helayaa?
30-Maalinta Soo Celinta
Dukaan bilaash ah oo ku socota Amarada US $ 25 +
Bixinta Aduunka oo dhan
Xarkaha Kaamirada ee Kaamirooyinka aan Muraayadda lahayn & Is haysta
Xargaha Ka Fiican Kaamirooyinka Yaryar
Khibrad heerar cusub oo xagjir ah xawaaraha, jilicsanaan iyo farbarasho - oo leh xargo loogu talagalay kaliya muraayad la'aan, mashiinka kala duwan, M4 / 3, iswaafajinta DSLR, iyo kamaradaha filimka 35mm. Lagu sameeyay USA.
Xarkaha simplr waxaa si gaar ah loogu talagalay kamaradaha yar yar, kuwa xirfadda leh.
Fududeynta qaabdhismeedka badan ee F1 waxaa lagu doortaa dhacdo, aroos, iyo sawir qaadayaasha waddooyinka ee doorbida inay si daacadnimo ah u shaqeeyaan. Ku dhufashada isku dheelitirka habboon ee raaxada iyo jilicsanaanta jilicsan ee muraayadda badankood, M4 / 3 ama kamaradaha kala-baxa (ama sida "ugu yar" suunka kaamirooyinka waaweyn), xitaa waxay u beddeleysaa suunka karti-karka ah ee qiyaastii 15 sekan.
Guryaha awoodeed ee maanta loo yaqaan 'pint-size powerhouses', ma jiro suun kale oo la mid ah F1ultralight. La mid ah F1-keena, oo leh xitaa dheeraad ah Jaangooyooyinka culeyska baalka, waxaa loo qaabeeyey kaliya jiilka ugu dambeeya ee kamaradaha yar yar (sida Fuji X100 iyo taxanaha Sony RX1R).
Tirada Caato ah, Miisaanka Fudud & Isugeyn La Yaab Leh
Isku hagaajin Dheeraad Dheer, Fudud
Awood, Adkaysi & Qarsoodi Lagu Sameeyay Farsamada Maraykanka
Muuqaalka la fahmi karo oo ay kujirto Sumad Yar
30-Maalinta Soo Celinta & Dammaanadda nolosha
Aragtiyaha ugu dambeeyay & Simplr Aragtidayada blog
Wired: Bacaha Kaamerada ee ugu Fiican, Xarkaha, Gelinta, iyo Boorsooyinka dhabarka
Falanqeeyaha Scott Gilbertson wuxuu u magacaabay Simplr inuu yahay suunka kaamirada uu jecelyahay ee ku jirta Wired's Best Camera Bag, Straps, Inserts, and Backpacks (2021). “Stra suunka weyn, iyo tan ugu fiican ee aan isticmaalay. Waxay leedahay wax kasta oo aan doonayo iyo wax aanan samayn. Kama qaylinayso 'Waxaan ahay sawir qaade,' mana laha dawanno iyo fooriyo badan, laakiin si aad u wanaagsan ayey u fiican tahay […]
Jay Fei: Maxaa Kujira Boorsadeyda Kaamirada
Jay Fei waa sawir qaade xamaasadeysan, oo la wadaagaya safarkiisa sawir qaadista ah (laga soo qaado is-sheegashada hiwaayadda hiwaayadda leh) ee kanaalka YouTube-ka, JayRegular. Wuxuu ku cabirayaa fikrado cadaalad ah oo dheellitiran oo ku saabsan qalabka, gaar ahaan Fuji X100V, wuxuuna leeyahay aqoon u leh inuu wax ugu sharraxo ereyo kooban oo kooban - marka iska hubi. Fiidiyowgaan, wuxuu sameeyay […]
Fujinon XF35mmF1.4 R Muuqaal Video ah oo ay la socoto Charlene Winfred
Haddii aad na weydiin laheyd sawir qaadee aan aadka ugu dhownahay Fuji sixirkiisa XF35mmF1.4 R, waxay noqon laheyd Charlene Winfred. Markaa waa ku habboon tahay in Fujifilm naftooda ay doorteen inay iyada ku soo bandhigaan fiidiyowgooda cusub ee loogu talagalay tan (oo aan ahayn wax cusub). Adduunyada cusubi waxay had iyo jeer la mid tahay […]
Ka akhriso inbadan oo ku saabsan BartayadaRaadi Suunkaaga Ku Haboon
Rar bilaash ah Amarada Mareykanka $ 25 +
Marnaba uma dirno qashinka… kaliya ogeysiis cusub oo alaab & dhiirigelin qiimo leh.
Xuquuqda daabacaadda © 2021 Simplr LLC. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan. Qiimaha lagu soo bandhigay US $.
Ku Saabsan Midabkeena
Sababtoo ah waxaan ku farsameynaa badeecadeena, alaabooyinka laga sameeyay halkan Mareykanka, anaga ma samayn u baahan tahay inaad sameyso kumanaan xarig oo kamarad ah markiiba. Iyada oo soosaarka waxsoosaarka yar yari, ayaa imanaya xorriyadda bixinta midabyo badan!
Midabku Maahan Qurxinta Kaliya
Waxay leedahay ujeedo wax ku ool ah sidoo kale. Sawir kan: Waxaad ku tooganeysaa dhacdo qaab laba kamaradood ah oo caadi ah - hal jidh oo leh muraayad dhexdhexaad ah oo ballaadhan, iyo mid leh sawir gaaban. Geli a kala duwan suunka midabka kamarad kasta si aad isla markaaba u ogaato kan uu yahay (xitaa intuu weli ku jiro boorsadaada).
Midabyo gaar ah - tiro kooban
Si aan wax u cusbooneysiiyo, waxaan jecelnahay inaan midabbadayada u ruxno waqti ka waqti. Haa, waxay u badan tahay inaan helno suunka aad rabto midab madow… laga yaabee mid ama laba kale - laakiin markaan iibino - badanaa ma samayn waxay leeyihiin qorshe kasta oo aad wax badan kaga qaban karto mustaqbalka dhow. Marka hadaad aragto midab aad jeceshahay - ku qabso intaan helnay!
tifaftiraha caadiga-xusuusnow: tafatiraha caadiga ah
Waa maxay nooca isku xiraha ee kamaradaydu leedahay?
Waxaa laga helay: kamarad kasta oo la timid seddex xagal ama wareegyo wareegsan; inta badan Fujifilm; Nikon-ga heer sare ah; Leica; Olympus; Sony; badmaaxyada ugu muhiimsan 35mm; Sidoo kale loo yaqaan "wareega" ama "giraan" buur.
Waxaa laga helay: inta badan Canon; gelitaanka- iyo heerka dhexe ee Nikon; Fujifilm X-E4, GFX 50S (ku xir xarkaha Fuji-bixiya clips lifaaqa), X-T100, XA Series; guridda Rolleiflex. Sidoo kale loo yaqaan "slotted" ama "rectangular" Mount.
Hel Dib-u-Bixinta Koowaad
Midabada daabacan ee xaddidan & iibka tooska ah ee xilliyada qaarkood ayaa si dhakhso leh u lumiya
view Cart Baadhid Continue Shopping